स्तनपान - हाँ वा होइन? मेरो बच्चाको लागि उत्तम के हो?
स्तनपान | बच्चा
Breastmilk लाई सक्रिय पार्दै
स्तनपान गर्दा सुरक्षाको महसुस
आमाले उनको बच्चालाई किन स्तनपान गर्नुपर्छ?
के मैले मेरो बच्चालाई दूध दिनुपर्छ? एउटा प्रश्न धेरै आशाजनक आमाहरूले सोध्छन्। केहि लागि यो एक स्पष्ट कुरा हो, तर अरुको लागि होइन। धेरै आश्चर्य र यो कसरी गर्ने "सही" वा के गर्ने?
स्तनपान - भावनाको कुरा
विशेष गरी पहिलो बच्चा असुरक्षित हुन्छ, तर अनुभवी बहु जना आमाहरूले फेरि अनुभव गर्दछन् जब दोस्रो वा तेस्रो बच्चा अचानक स्तनपानको सन्दर्भमा फरक इच्छाहरू र प्रतिक्रियाहरू संकेत गर्दछ।
के मैले मेरो बच्चालाई दूध दिनुपर्छ? सूचना र सुझावहरू
आमा र बच्चाबीचको गैरकानुनी संचारको रूपमा स्तनपान
तथापि, आमा र डाइवियसको अनुभवले देखाउँछ कि तनाव वा स्तनपानको योजना पनि कम अर्थ दिन्छ। किनभने एकै ठाउँमा त्यहाँ ज्ञान छ, तर अर्कोतर्फ बच्चा।
र त्यसमा केवल एक भन्न छ। उनको प्राथमिकता, आवश्यकता, भोक को भावनाहरु, तर निकटता र सुरक्षा को लागि इच्छा पनि समय संग स्तनपान को पाठ्यक्रम र लय निर्धारण गर्नेछ। आखिर, सानो पार्थिव नागरिक स्तनपानको सन्दर्भमा मुख्य व्यक्ति हो।
यदि आमाले आफ्नो बच्चालाई भरोसा राख्नुहुन्छ भने, यसको साथ संलग्न हुन्छ, र केहि सहनशीलता छ, यो वास्तवमा प्रारम्भिक कठिनाइहरू हटाउन उत्तम तरीका हो। यो प्रश्न मा पनि लागू हुन्छ कि कतिले स्तनपान गर्नुपर्छ। फेरि, त्यहाँ कुनै नियम छैन, कुनै नियम छैन। जबसम्म आमा र बच्चा मनपर्छ, त्यो ठीक छ।
यदि एक पक्ष को ढिलाइ को आवश्यकता को आवश्यकता हो, अधिकांश समय अर्को पक्ष पनि intuitively भावना संग यो रोक्न को लागी प्रतिक्रिया गर्दछ। आमा र बालिका बीचको कुराकानी लगभग विशेषतः अन्तराल र भावनाको बारे हो, जुन स्तनपान गर्दा भिन्न हुँदैन।
यदि पोषक तत्वको पक्षमा स्तनपानलाई पनि मानिन्छ भने, यसले जोड दिन्छ कि स्तन दूधको कुनै बराबर विकल्प छैन। व्यापारमा प्रस्तावित वैकल्पिक मिश्रणहरू गाई, सोया वा माछाको दूधमा आधारित हुन्छन् र दूधलाई जहाँसम्म सम्भव छ। तर तिनीहरूसँग त्यस्तो संरचना छैन।
किनकि यसले मात्र अत्यावश्यक प्रतिरक्षा पदार्थहरू समावेश गर्दछ जुन सानो व्यक्तिलाई चाहिन्छ, खास गरी आफ्नो घाम संरक्षणको लागि वर्षको पहिलो भागमा। यी मुख्यतया कोलोस्ट्रममा निहित छन्, जसलाई तथाकथित फोमिलिल भनिन्छ, जुन जन्म पछि पहिलो दिनमा वितरित गरिन्छ। त्यसपछि यो वास्तविक स्तन दूधको गठन हुन्छ।
यहाँ रचना फेरि केहि फरक छ। आमाको दूधको अगुवाबाट रातीमा प्रोटीन सामग्री घटाउँछ, वसा र कार्बोहाइड्रेट सामग्री बढ्छ। उत्पादन मात्रामा आपूर्ति-आपूर्ति अनुपात मा निर्भर गर्दछ, यद्यपि माग पनि भिन्न हुन सक्छ। मात्र मानव दूध बच्चाको खाँचोमा आधारित हुन्छ। गाईको दूध बच्चाको लागि धेरै प्रोटीन समावेश गर्दछ वा प्रोटीन अणुको एकदम ठूलो हुन्छ, जसले गुर्देलाई क्षति पार्न सक्छ। यसैले, गाय को दूध को जीवन को पहिलो वर्ष मा नहीं दिइएको छ। कार्बोहाइड्रेट र मोटो सामग्री, अर्कोतर्फ, धेरै कम छ।
तथापि, पोषण प्रश्नको अलावा, स्तनपानले अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य पनि पूरा गर्दछ: आमा र बच्चाबीच भावनात्मक सम्बन्ध। विशेष गरी शुरुमा, तपाईंले पहिलो "" एक-अर्कालाई जान्न "गर्नुपर्नेछ भने, बच्चाले नयाँ वातावरणमा मामाको पेटबाट तापनि संरक्षण बिना आफ्नो मार्ग खोज्न र अझै पनि सुरक्षाको आवश्यकता पर्दछ। त्यसपछि मात्र स्तनपानले यी पक्षहरूलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ।
स्तनपानले बच्चालाई सुरक्षा दिन्छ
मातृ र बच्चा, जो स्तनपानको समयमा उत्पादन गरिन्छ, को बीच अंतरंग, मायालु सम्बन्ध बन्नु पनि केहि अरुसँग बदल्न कठिन छ। यहाँ महत्वपूर्ण छ एकदम धेरै वातावरण, शान्ति, सान्त्वना र सान्त्वना।
कुनै टिभि वा रेडियो कुनै तरिकाले चलाउनुपर्दछ, फोन बन्द गर्नुपर्छ र यदि सम्भव भएमा गृहकार्यलाई गृहकार्यलाई पेश गरिनेछ। यस वातावरणमा, दुवै एकता संग घनिष्ठ सम्बन्ध र आनन्दित सम्बन्ध बनाउन सक्नुहुन्छ।
निस्सन्देह, स्तनपानमा धेरै व्यावहारिक पक्षहरू छन्। यो संधै र हरेक ठाँउ सही खाना, उचित रचना र तापमान मा, ताजा तयार र मर्मत-रहित। बोतलको कुनै यातायात, बोतल न्यानो र अन्य सामानहरू आवश्यक पर्दछ। यसले आमालाई थप लचीलापन र कम संगठनात्मक प्रयासलाई पनि अनुमति दिन्छ।
सबै मा, यो प्रकृति को ज्ञान को ज्योति गरेको छ ताकि स्तनपान एक नयाँ सानो मानव बच्चा को लागि जीवन मा इष्टतम शुरुवात हो। पोषण, भावनात्मक र रसद। निस्सन्देह, त्यहाँ महिलाहरु छन् जो स्तनपान गर्न सक्दैन वा चाहँदैनन्। पछि पनि ठीक छ, किनकि तपाईंको आफ्नै भावनाको विरुद्ध कुनै बाध्यता हुनुपर्दछ। त्यो दुवै पक्षमा राम्रो हुनेछैन। यद्यपि, यदि स्तनपानको इच्छा र संभावना छ भने, यो कुनै कृत्रिम समाधानको लागि उपयुक्त हुनुपर्छ।
धेरै गर्भवती आमाहरूले स्तनपान गर्नु हुँदैन वा नसोचेमा सोच्दैछन्। धेरै चिकित्सकहरूले तिनीहरूलाई स्पष्ट हो।
के मैले साँच्चै मेरो बच्चालाई स्तनपान गर्नुपर्छ?
नयाँ आमाहरूको बहुसंख्यक स्तनपानको अत्यधिक सिफारिस गरिन्छ। सम्म द्वारा हेनरी नेस्ले बच्चा खाना 1867 द्वारा नेस्ले कम्पनी विकसित भएको थियो, स्तनपान शिशुहरू को रुचाउने लागि मात्र कारगर विकल्प थियो। यदि आमाले आफ्नै बच्चालाई खाना तिर्न सकेन भने आमाको लागि बच्चालाई खाना बनाउन एक नर्स फेला पर्यो।
बच्चाको परिचयको परिचय स्वागत थियो किनभने यसको मतलब भनेको बच्चाहरु को लागि एक अधिक सार्थक पोषण वैकल्पिक थियो जसका आमाहरु लाई उनको स्तनपान गर्न असमर्थ थिए।
तर स्तनपानको लागि कहीं पनि, स्तनपान केही पृष्ठभूमिमा र बच्चाको खानामा बच्चाहरु को खाने को लागि पसंदीदा तरीका बन्यो। त्यो कसरी भयो?
केहि व्यक्तिहरु लाई यो सोच्न को लागी कि यो बच्चाहरु को खाद्य निर्माताहरु द्वारा प्रभावी विपणन अभियान हो। अन्य मानिसहरूले विश्वास गर्छन् कि यो कार्यस्थल मा आमाहरु को बढती गोद लेने को एक परिणाम थियो, यो बच्चाहरु मा मासु को मुश्किल बनाउन को लागी।
सौभाग्यवश, आजको प्रवृति मातृहरूका लागि स्तनपान गर्नका बच्चाहरुका लागि होईन, भित्ता केवल केहि महिना सम्म। मेरो पहिलो बच्चा जन्मिएको बेला स्तनपानलाई समर्थन गरिएको थियो, र लाभहरू मलाई राम्ररी वर्णन गरिएको थियो, तर आमाले स्तनपान गर्नुभन्दा धेरै असफलता थियो। यो एक आमा को लागि एक निजी स्थान मा स्तनपान गर्न को लागी राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो जहाँ कुनै पनि उसलाई हेर्न सक्दैन। केवल सम्भव तरिका एक नर्सिंग मातृ को लागि सारा समय घर रहन को लागि थियो र सार्वजनिक नहीं जान्छ, जो सुन्दर हास्यास्पद छ।
मेरी आमा मासु को एक निर्णय थियो जुन मेरो स्तनपान संग निर्णय नहीं थियो। उनीहरूले मनपराउने कारण यो यो छ कि उनले मलाई घृणा गर्थे जब मैले मेरो बच्चाको वरिपरि मेरो घर भन्दा अरुलाई नचाहेर अरुलाई नपढेँ। तथापि, मैले सबै अनुमोदनलाई बेवास्ता गरेँ र मैले धेरै गरेकी छु। मेरो छोराले एलर्जीसँग कुनै समस्या थिएन कि मलाई मेरो सबै जीवनलाई दबाइयो (म एक बच्चाको रूपमा दूध थिएन), र मलाई लाग्छ कि स्तनपानले उनलाई रक्षा गर्न मद्दत गरेको छ। अध्ययनले देखाउँछ कि एलर्जीको संरक्षण र प्रतिरोध स्तनपानको धेरै लाभहरू मध्ये एक हो।
यद्यपि विशेषज्ञहरूले कम्तीमा छ महिनाको लागि स्तनपान गर्ने सिफारिस गर्छन् (स्तनपान एक वर्षको लागि आदर्श हो), स्तनपानको केही महिना मात्र मातृ र बच्चालाई महत्त्वपूर्ण फाइदा लिन सक्छ। पहिलो, यो बच्चाको लागि उत्तम खाना हो, किनभने प्रकृतिले त्यो तरिका बनायो। यसको मतलब यो छ कि बच्चाहरु संग बच्चाहरु संग स्तनपान मा एक बच्चाहरु संग कम समस्याहरु छन्।
आमाको लागि स्तनपानको फाइदाहरू के हुन्?
यो बच्चा खाना भन्दा सस्तो छ। स्तनपानले नयाँ आमालाई आमाको रूपमा गर्भधारण पाउन्ड गुमाउन मद्दत गर्न सक्दछ जसको शरीरले मासु दूध उत्पादन गर्दछ अधिक क्यालोरी। स्तनपानले गर्भाशय रिटर्नलाई सामान्य आकार अझ बढी छिटोमा पनि मद्दत गर्छ, जस्तै कि ओक्सीटोकिन रक्तचापमा रिलीज भएको बेलामा मासु छाड्ने हुन्छ।
बच्चाको लागि स्तनपानको केहि लाभ के हो?
बच्चाको खाना भन्दा भन्दा बच्चाको स्तन दूध एलर्जी हुन सम्भव छ। यसको अतिरिक्त, कोलोस्ट्रम, जसले बच्चाहरु र जीवाणुहरु लाई एक बच्चा प्रतिरक्षा दिन्छ, बच्चाको जन्म पछि धेरै दिन पछि स्तन दूध मा उपस्थित छ। अध्ययनले देखाउँछ कि स्तनपानका बच्चाहरु शिशुहरु भन्दा कम सम्भावना हुनसक्दछ, कम संक्रमण (जस्तै कान संक्रमणहरु) र भाइरसको कम संवेदनशील हुन्छ। यो कारणले स्तनपानमा एंटीबॉडी हुन्छ जसले बच्चाहरूलाई संक्रमण र रोगबाट बचाउँछ।
फिर्ता काम गर्न जाने छ, तर अझै पनि स्तन दूध संग उनको बच्चा प्रदान गर्न चाहने आमाहरू लागि ठूलो कुरा हो - उच्च गुणवत्ता र प्रयोग गर्न सजिलो स्तन सजिलो आमा तिनीहरूले घर देखि टाढा हुँदा आफ्नो बच्चाहरु र स्टोर लागि स्तन दूध पंप लागि बनाउन पम्प।
पृष्ठ शिशुको स्तनपान गर्नुहोस्
स्तनपान - फिबरहरू समावेश गर्नुहोस्
बच्चा र बच्चाको लागि सनस्क्रिन | स्वास्थ्य ...
गर्भावस्थामा धूम्रपान | स्वास्थ्य र बेबी
बेबी हेरविचार मुख र दाँतको बच्चा
बेबी हेरचाह - बच्चा देखि बालहरुको हेरविचार
बेबी हेरविचार - शरीरको हेरचाह बच्चा
बेबी हेरचाह - बच्चाको अनुहार
बेबी हेरविचार - शिशुमा चमत्कार बट
बच्चाको जन्ममा उपहार
प्यासिफायरबाट हटाउनुहोस् | बेबी बच्चा
पृष्ठ गर्भावस्था बच्चा रङ
बच्चाको साथमा आमालाई पृष्ठ रङ गर्नुहोस्
बच्चाहरु संग बच्चाहरु भाईबहिनी रंगीन
पृष्ठ रङको रंग र आमा
बच्चाको साथ पृष्ठ स्टर्क रङ